Kuphume izidumbu ecasulwa yiziqashi - Ilanga News
Home Izindaba Kuphume izidumbu ecasulwa yiziqashi
Ushiye iheheba lencwadi exolisa
NgUMnu Msezane Mathebula okuthiwa uzilengise nendodana yakhe.
NguNkosikhona Mathebula uyise azibulale naye ecasulwa yiziqashi.
UCASULWE yiziqashi zakhe ebezingayikhokhanga imali yerenti waqoma ukulengisa indodana yakhe ayibulale naye wazilengisa owesilisa waseNtshawini, KwaDukuza.
UMnu Msezane Mathebula (53), okuthiwa uzilengise nendodana yakhe uNkosikhona Mathebula (4), ngoMsombuluko emzini wakhe, ushiye iheheba lencwadi exolisa emndenini ngesinqumo asithathile.
Kuthiwa utshele umndeni wakhe kuleli heheba ukuthi ubengeke akwazi ukufa ashiye indodana yakhe kwazise ubengeke akuthole ukuphumula ngoba bebekhonzene kakhulu futhi bengahlukani.
ILANGA lithole ukuthi ngaphambi kokuba azibulale uMnu Mathebula okuthiwa ubewukhonze kakhulu umndeni wakhe uxoxele indodakazi yakhe endala ukuthi kunabantu abaqashe endaweni yakhe abangamphethe kahle, kabafuni ukukhokha imali yerenti ephelele, sekunesikhathi benza le nto.
Kuthiwa uyitshele ukuthi lokho sekuze kwagcina kuholele ekutheni axabane nalezo ziqashi. Kusolwa ukuthi uzibulala nje, ubesenesikhathi ekuhlelile lokhu njengoba kuthiwa uhambile wayothenga intambo entsha ceke yokukhuleka izimbuzi, wayigcina emotweni ukuze inkosikazi nezingane bangayiboni.
Kuthiwa umkakhe obebuya ukuyohola ucishe washayeka phansi ngesikhathi ezithela ezidunjini zilenga endlini eceleni kunencwadi ebhalwe nguMnu Mathebula.
Umfowabo kamufi, uMnu Thembinkosi Mathebula, obezwakala ngisho ocingweni ukuthi usamangele ngesinqumo somfowabo, uthe: “Umfowethu ubeyithanda kakhulu indodana yakhe, bebengahlukani, ubuhlale umfica ehamba nayo.
“Ngisho eshayela ubeyigona esiteringini ashayele nayo, kodwa yize kunjalo, bekungafanele athathe isinqumo sokuzibulala nayo uma kukhona okumphethe kabi.
“Indodakazi yakhe endala ithi uyixoxele ukuthi uke waphazamisana nezinye iziqashi zakhe, edinwa wukuthi kazimkhokheli kahle imali yerenti, kodwa yize kunjalo siyasola ukuthi kukhona okunye obekungamphethe kahle angasitshelanga khona.
“Bengingekho ngesikhathi kwenzeka lokhu bengisemzini wami, ngithole ucingo mayelana nokutholakala kwezidumbu endlini. Ngiyasola ukuthi umfowethu ubesevele ekuhlelile ukuthi uzozibulala ngale ndlela wabe eselinda inkosikazi yakhe ukuba iqale ihambe ngaphambi kokuba azibulale ngoba ubazi ukuthi izohamba iyohola iqolo.
“Into engenza ngisho njalo wukuthi inkosikazi yakhe ibingajwayele ukuhamba ngamatekisi uma kukhona indlela eyithathayo, ubejwayele ukuyihambisa ngemoto, kodwa kulokhu uyiyekile yazigibelela,” kusho uMnu Mathebula.
Uchaze umfowabo njengomuntu obengakukhonzile ukukhuluma futhi engenalo udlame. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthi kuvulwe icala lokubulala nedokodo lophenyo ngokutholakala kwezidumbu ezimbili. Uthe amaphoyisa ayaphenya ngalesi sigameko.
Previous articleLibuyele emuva iloli ebelinofata omusha
Next articleKutuswa owesilisa ofe nezinswelaboya ebezimduna imoto